Soo-saareyaasha monopole - Warshada monopole ee Shiinaha, alaab-qeybiyeyaal
8M GSM Monopole Steel Tower oo loogu talagalay Baahinta TV-ga
munaaradda isgaarsiintu waa nooc ka mid ah munaaradda gudbinta calaamadaha, sidoo kale loo yaqaan munaaradda gudbinta signalka ama munaaradda calaamadaha.Shaqadeeda ugu weyn waa inay taageerto gudbinta calaamadaha iyo anteenada gudbinta calaamadaha.Ujeedada: Mobile / China Unicom / nidaamka meelaynta dayax-gacmeedka gaadiidka (GPS) iyo waaxaha kale ee isgaarsiinta.
Tiirka qudha ee tuubada waa mid ka mid ah qaababka caadiga ah ee munaaradda isgaarsiinta.Aad bay caan u tahay sababtoo ah bedkeeda dhulka oo yar iyo miisaan yar.
10M Birta Microwave Monopole Telecom Tower
munaaradda hal tube, waa nooc caadi ahaan loo isticmaalo, muuqaal qurux badan leh, daboolaya meel yar oo ah 9 ilaa 18 mitir oo laba jibbaaran, kharash-ool ah, oo ay qaataan , inta badan dhismaha.Jirka Tower wuxuu qaataa qayb macquul ah oo macquul ah, kaas oo ku xiran bolt xoog sare leh. wuxuu leeyahay sifooyin rakibid fudud wuxuuna la qabsan karaa goobo kala duwan oo la fayl-gareeyay.
Isgaadhsiinta hal Tube Steel Monopole Wifi Antenna Tower
Monopole Tubular Tower Pole waa nooc ka mid ah munaarad bir ah oo waxtar leh oo cusub.Waxaa si weyn u isticmaala qaybaha dhismaha sababtoo ah quruxdeeda quruxda badan, aagga dabaqa yar, waxqabadka qiimaha sare iyo adkeysiga.Waxaa inta badan loo isticmaalaa microwave, mowjad ultra gaaban, gudbinta signalada network wireless iyo gudbinta.
Galvanized Steel WiFi Tower cirifka Tower
Taawarrada Wi-Fi waa munaarado sii daaya dariiq toosan oo ishaareed ah ilaa 60 mayl oo kaliya la xidhiidha munaaradaha kale ee Wi-Fi marka ay ka dhex arkaan muuqaal aan cidi lahayn.Ka hel Wifi Tower qiimaha ugu fiican ee Warshada tooska ah, La xidhiidh Hadda!!!
Q235B Q355B Birta TV Antenna baahinta Tower
munaaradda monopole, waa nooc caadi ahaan loo isticmaalo munaaradda isgaarsiinta, muuqaal qurux badan leh, oo daboolaya meel yar oo ah 9 ilaa 18 mitir oo laba jibbaaran, kharash-ku-ool ah, waxaana la qaataa, inta badan dhismaha.Jirka Tower wuxuu qaataa qayb macquul ah oo macquul ah, kaas oo ku xiran bolt xoog sare leh. wuxuu leeyahay sifooyin rakibid fudud wuxuuna la qabsan karaa goobo kala duwan oo la fayl-gareeyay.
ISO9001 Single tube Bir Tower
munaaradda hal tuubo oo sidoo kale loo yaqaan munaaradda monopole, waa nooc caadi ahaan loo isticmaalo, muuqaal qurux badan leh, daboolaya aag yar oo 9 ilaa 18 mitir oo laba jibbaaran, kharash-ool ah, waxaana la qaataa, inta badan dhismaha.Jirka Tower wuxuu qaataa qayb macquul ah oo macquul ah, kaas oo ku xiran bolt xoog sare leh. wuxuu leeyahay sifooyin rakibid fudud wuxuuna la qabsan karaa goobo kala duwan oo la fayl-gareeyay.
12m Kulul DIP Galvanized Mobile Light Monopole Tower